बिर्सने समस्या छ ? यी उपाय अपनाउँदा रहनेछ तपाईंको दिमाग तेज - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com बिर्सने समस्या छ ? यी उपाय अपनाउँदा रहनेछ तपाईंको दिमाग तेज - खबर प्रवाह
बिर्सने समस्या छ ? यी उपाय अपनाउँदा रहनेछ तपाईंको दिमाग तेज
तपाईंलाई विर्सने समस्याले सताएको छ । बढी भुल्ने र बिर्सने समस्या छ । छ भने तपाईको खान्कीमा पौस्टिक तत्वको अभाव रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
गोलभेँडा – गोलभेँडामा प्रोटिन, भिटामिन, तथा विभिन्न खाले लवण जस्ता तत्व पाइन्छ । यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम हुन्छ ।
गोलभेँडामा हुने लाइकोपिन तत्वले सरीरमा स्वतन्त्र रेडिकल्सको सुरक्षा गर्दछ र मस्तिष्क कोषको क्षयिकरण रोक्दछ ।
दही -दहीमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, चिल्लो, क्याल्सियम तथा फोस्फोरस जस्ता लवणहरु पाइन्छ । यसले सरीरमा लाभदायी जिवाणुलाई समेत फाइदा पूराउँछ भने हानिकारक जिवाणुलाई नष्ट गर्न सहयोग गर्छ ।
दहीमा एमिनो एसिड पाइन्छ जसले दिमागी तनाव कम गरी स्मरण शक्तिमा बढोत्तरी गर्न सघाउ पूराउँछ ।
जाइफल -जाइफलको सेवनले सरीरलाई चिसोबाट बचाउने मात्र होइन यसमा हुने विशेष तत्वले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न तथा स्मरण शक्ति बढाउन मद्दत पुराउँछ ।
माओवादी सखाप नपारे नेपालीको जीवन सुखी हुँदैन : पूर्व अर्थसचिव खनाल